J. R. Willett သည်ပထမဆုံး ICO ကိုစတင်ခဲ့သည် - Cointelegraph မဂ္ဂဇင်း - Token Myanmar
ICOs လား။ သူကပထမ ဦး ဆုံးကျင်းပခဲ့တယ်။ Stablecoins? သူကသူတို့ကိုမတော်တဆအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ Vitalik Buterin က Ethereum ကိုကူညီဖို့သူ့ကိုသင်္ဘောပေါ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူကအရမ်းအလုပ်များခဲ့တယ်။ သူသည်ဂျေ။ ဝီလက်တ်ဖြစ်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Willett (ယခု ၄၁ နှစ်) သည်သူသည်ပရိုတိုကော၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောတိုကင်များကိုဖန်တီးရန်မည်သူကိုမဆိုလုပ်ခြင်းဖြင့် Bitcoin ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူကမော်ဒယ်သစ်ကိုဖော်ပြသည့်အဖြူရောင်စက္ကူဖြန့်ချိခြင်းနှင့်စီမံကိန်းကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူဟာနောက် ၁၈ လအကြာမှာအခြားတစ်ယောက်ယောက်ကငါးစာစားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး Mastercoin ကန ဦး အကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Ethereum နှင့်နောက်ဆက်တွဲ ICO များကိုလာအောင်နှိုးဆွပေးခဲ့သည်။
“ ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စကားလုံးတွေနဲ့ပဲတင်စားသလိုခံစားရတယ်၊ လူတွေဒီအကြောင်းကိုပြောနေကြတယ်၊ 'ငါဘာလို့ဒီဟာကိုအနည်းဆုံးနည်းနည်းဘာကြောင့်တရားဝင်မလုပ်တာလဲ' ငါစဉ်းစားမိတယ်။ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ။ "
အစောပိုင်းကာလများတွင်သူသည် cryptocurrency နှောင်းပိုင်းမွေးစားဖြစ်စေခြင်းမရှိသောဖြစ်လာခဲ့သည်သို့မဟုတ်တစ်ကမ္ဘာအစိုးရကလူတိုင်းရဲ့ငွေပေးငွေယူကိုထိန်းညှိဖွဲ့စည်းရန်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာ dystopia အကြောင်းကိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ သူနေဆဲစိုးရိမ်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမှုအရာသူကိုကွောကျရှံ့ချင်ပါတယ်ထက်ပိုကောင်းသွားနေကြသည်။
cryptocurrency ကမ္ဘာ၏ထိပ်သို့တက်သူကိုခြွင်းချက်များနှင့်သြဇာလူမျိုး၏ပင်လယ်၌, Willett ထွက်ရပ်တည်။ မဟုတ်ဘူး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှအကြွင်းမဲ့အာဏာခံယူချက်, မဟုတ်ဘူး စုတ်ကနေစည်းစိမ်ဥစ္စာဖို့ခရီးသူ၏ "ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခု“ စီမံကိန်းနှင့်ကပ်ရန်မဟုတ် outsized ကုသိုလ်ဖြစ်ရေးရာနှင့်ပင်မ၌တည်၏ မိမိအအနုပညာကြိုးပမ်း သို့မဟုတ်ခမ်းနားသည် အနာဂတ်အတွက်ရူပါရုံ။ Willett ကသူထူးထူးခြားခြားလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူဟာအရေးအကြီးဆုံးအရာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။
ပထမ ဦး ဆုံး ICO
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာကြီးအသံထွက်လာသောအခါ Bitcoin သည်မြို့ထဲတွင်တစ်ခုတည်းသောဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Bitcoin, blockchain နှင့် cryptocurrency သည်သုံးလမပြည့်သေးသောအသစ်ထုပ်ပိုးထားသော Litecoin လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် (LTC သည် Bitcoin ကဲ့သို့သတ္တုတူးဖော်ရေးမှတစ်ဆင့်ဖန်တီးခဲ့ခြင်း) မှတစ်ဆင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Willett အိုးနှိုးဆော်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ဒီမှာပါပဲ ထုတ်ဝေ သူခေါ်သော “ဒုတိယ Bitcoin Whitepaper ။ "
အဆိုပါ mastercoin prospectus စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံး ICO ဖြစ်ပြီးအဖြူရောင်စာရွက်များသွားသည့်အတိုင်းအလွန်ကောင်းသည်။ ဒါကြောင့်ပင်အန္တရာယ်ထုတ်ဖော်ရှိပါတယ်! နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်တွင်အကောင်အထည်ဖော်မည့်အကြံဥာဏ်အမြောက်အများ – DEXes, stablecoins, tokenization, onchain govhttps://t.co/noFt1PKzUD
– nic Carter (@nic__carter) ဒီဇင်ဘာလ 8, 2020
သူက“ လက်ရှိ Bitcoin network ကို protocol layer အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်၊ အပေါ်ယံအားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲစည်းမျဉ်းသစ်များနှင့်အတူငွေကြေးအလွှာအသစ်များတည်ဆောက်နိုင်သည်။ စိတ်ကူးက Bitcoin ရဲ့ထိပ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့တိုကင်အသစ်တွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ စမတ်ကန်ထရိုက်တွေကသူတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တယ်။ “ Mastercoin သည်ခေါင်းစဉ်များ၊ အပြုအမူများ၊ သုံးစွဲသူများကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောငွေကြေးများနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အစုရှယ်ယာများအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်ပစ္စည်းတိုကင်များကိုဖန်တီးရန်ပံ့ပိုးသည်” ဟုအဆိုပါစာတမ်းကရှင်းပြသည်။
ယင်းသည်ယနေ့ Ethereum နှင့်တူသည်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သော ERC-20 တိုကင်များနှင့်စမတ်စာချုပ်များနှင့်ပြည့်စုံသည်။ Ethereum သည် Willett ၏စိတ်ကူးများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
"Vitalik သည်သူ၏အတွေးအခေါ်များနှင့်အစပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလာ။ , ကျနော်တို့ '' ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ချင်သောအခြားအရာတို့ကိုရရှိပါသည်။ '' သူကသူ့ကိုပြောပြသည်သူမစောင့်ချင်ကြဘူး, သူသည်မဘို့သူ့ကိုအဘို့ကောင်းပါတယ်။ Ethereum အဲဒါ၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
Willett သည်တည်ငြိမ်သောငွေစက္ကူများကိုပင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ “ Bitcoin ကအခုဆိုရင်ငွေခဝါချမှုအတွက်နာမည်ကောင်းပြproblemနာရှိနေပြီလို့သင်ထင်ရင်၊ 'USDCoins' ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်ထဲမှာသိမ်းထားနိုင်သည့်အထိစောင့်ဆိုင်းပါ။ " ဒါကစိတ်ကူးအသစ်တစ်ခုပဲ။ သူကဒီတီထွင်မှုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။
Mastercoin ၏ပစ်လွှတ်မှုနှင့်အမှတ်အသားရောင်းချမှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးသော ICO အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး BTC တစ်ခုလျှင် ၁၀၀ MSC ငွေလဲနှုန်းဖြင့်ဒင်္ဂါးများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဤပထမ ဦး ဆုံးဒင်္ဂါးပြားသည် Genetic block နှင့် Mastercoin ၏ညီမျှမှုဖြစ်သည့်“ Exodus Address” မှလက်ခံရရှိခဲ့သည် – Bitcoin သည်အစပြုစဉ်၊ Mastercoin ကိုနောက်ခေတ်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
Willett သည် Bitcointalk ဖိုရမ်တွင် Mastercoin ကိုကြေငြာသောအခါသူသည်၎င်းကိုပိုက်ဆံစုဆောင်းရန်အတွက် "သင့်လျော်သောနည်းလမ်း" ကိုလှည့်ပတ်ရန်တစ်ကြိမ်တည်းဖြတ်လမ်းတစ်ခုအဖြစ်သူထင်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာအဲဒီအချိန်ကဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကဲ့သို့မခံစားရဘူး" ဟုသူကဆိုသည်။
"ငါသည်ဖြတ်လမ်းတစ်နည်းနည်းတွေ့ပြီထင် – ငါရုံကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ပျံသွားတစ် ဦး အစေးကုန်းပတ်အတူတကွနှင့် Bitcoin ၏မကြားဘူးအများစုကအကျိုးတူအရင်းရှင်များနှင့်စကားပြောသွားဖို့အချိန်မပေးခဲ့ပါဘူး။ "
နောက်ဆုံးတွင် Mastercoin သည် Mastercoin ဖောင်ဒေးရှင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးသူ့ဟာသူ Willett တည်ထောင်ခဲ့သော Omni ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သူသည်ဗိသုကာချုပ်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးစဉ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်သူ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းဝီလက်တ်ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ ပြwithနာကပိုက်ဆံတွေကုန်သွားတာနဲ့အမျှငါတို့ပိုက်ဆံကုန်နေပြီဆိုတာအားလုံးသိကြတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွက်လွှင့်မှုကနေလေကိုထုတ်ယူလိုက်တာပဲ” ဟုသူကရယ်မောပြီးပြန်ပြောပြသည်။ ဒီနေ့ Omni အလွှာ ၎င်းသည်“ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်၊ ခွင့်ပြု "ထုံးစံဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ငွေကြေးဖန်တီးနှင့်ကုန်သွယ်။ " အတွက်
သူသည်ဘီလျံနာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မဖြစ်ခြင်းအတွက်မည်သည့်နောင်တရသနည်းဟုမေးသောအခါသူသည်အလွန်စိတ်သောကရောက်နေသူဖြစ်သည်။ သူကတိတ်တဆိတ်ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ကလေးတွေမလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုအနိုင်နိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရိုးရှင်းသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူက "ဒါကပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ မင်းကစိတ်ဓာတ်အနည်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကနေဘာကိုရရှိနိုင်တာလဲ။ မင်းပြproblemsနာတွေအများကြီးရတယ်” ဟုသူကတွေးတောသည်။ အဲဒီမှာနောင်တရချင်တာလား။
ဝီလတ်သည်“ အမြဲတမ်းငွေနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသူ” ဖြစ်ပြီးဖခင်နှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောကလေးဘဝဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာများကို ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီး Willett သည် ၁၀ နှစ်အရွယ်တွင်မိသားစု၏ Apple II-GS ကွန်ပျူတာတွင်သင်္ကေတများကိုစတင်သင်ကြားခဲ့သည်။
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ် Willett သည်အိမ်သာများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောဆိုးရွားလှသည့်အလုပ်များလုပ်သည့်ဆိုင်အကူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ကြိမ်တွင်သူသည်လှောင်ပြောင်သောဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကိုရေးသားခဲ့ပြီးသူ၏အလုပ်ရှင်များကိုသူတို့ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်စေခဲ့သည်။ "သူတို့မှာ IBM ကွန်ပျူတာဟောင်းရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ငါအိမ်မှာရေးပြီးပြီးရင် floppy disk ထဲထည့်လိုက်တယ်" ဟုသူကရယ်မောသံများဖြင့်ပြန်ပြောပြသည်။
ဝီလက်သည်သူမအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်သိရှိသောအခါ Seattle Pacific University မှကွန်ပြူတာသိပ္ပံဘွဲ့သည်“ ပညာမဲ့သူ” ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
Oregon ရှိ“ dot-com startup” Alerio တွင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူအဖြစ် ၂ နှစ်ကြာပြီးနောက်သူသည် Dynon Avionics တွင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုတွင်ရှိသူ၏ ၁၁ နှစ်တာကာလအတွင်းလေယာဉ်ပျံသန်းမှုစီမံကိန်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး SpaceShipOne ကဲ့သို့ထူးခြားဆန်းပြားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်အသုံးပြုရန်ချိန်ညှိထားသောကိရိယာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်ဘယ် ပြီးစီးခဲ့သည် ပထမဆုံးအကြိမ်ပုဂ္ဂလိကအာကာသယာဉ်ပျံကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူသည်လက်ရှိအလုပ်ရှင် Cozi နှင့်ပူးပေါင်းကာ software developer အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ သူသည်မိသားစုများကိုစနစ်တကျနေထိုင်ရန်ကူညီသည့်မိုဘိုင်းပြက္ခဒိန်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဒါဟာအကောင်းတစ်လျောက်ပုံရသည်။ သူက "ကျွန်ုပ်သည်ကလေးမမွေးမီကပင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိသားစုလူသားတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ "
ဒါမှန်တယ် – Willett, ICO နှင့် algorithmic stablecoin နှစ် ဦး စလုံး၏တီထွင်သူ, နေဆဲတစ်နေ့အလုပ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ “ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကို cryptocurrencies နဲ့ချည်နှောင်ထားလို့မရဘူး” ဟုသူကမိဘ၏တာ ၀ န်များကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောကြားခဲ့သည်။
Dynon Avionics တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင် Willett သည်“ cryptocurrency” တွင်းထဲသို့ကျသွားပြီးဘယ်တော့မှထွက်မသွားခဲ့ပါ။ သူသည် Bitcoin စျေးနှုန်းသည် ၀.၂၅ အထိတက်နေသည်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် beige ကွန်ပျူတာမျှော်စင်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကိုသတိရသည်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဗဟိုအပြောင်းအလဲယူနစ် (CPU) ဖြင့်သာ BTC အလုံး ၅၀ ကိုအောင်မြင်စွာတူးဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
CPU သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းသည်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ GPU (Graphic Unit) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သတ္တုတူးဖော်ရေးရေကန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ASIC မိုင်းလုပ်သားများ (သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်အထူး software chips များ) သည်ရှုခင်းကိုလွှမ်းမိုးလာသည်။ "တောင်မှ, က CPU ကနေပိတ်ပင်တားဆီးမှုရပုံမှန်မဟုတ်သောခဲ့ပေမယ့်ကြားဖူးမဟုတ်ခဲ့," Willett ပြန်ပြောပြသည်။
သူ့လက်ထက်ကအခြားသူများနှင့်မတူဘဲဝီလက်သည် cryptocurrencies ကိုလူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်သို့မဟုတ်လူသားလွတ်မြောက်သူအဖြစ်ရှုမြင်ရန်မလာခဲ့ပါ။ အဲဒီအစားသူကသူ့ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်စေသော dystopian အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်ခဲ့သည်။ သူသည်ဘဏ်များကိုပုံခိုင်း။ မီးရှို့ခြင်းသို့မဟုတ်စနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းကိုတစ်ခါမျှမပြုလုပ်လိုခဲ့ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ရှိအဆောက်အအုံများကိုမှီခိုနေရသောလူအများအပြားကိုထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ္financialာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံကိုပျက်စီးစေသည့် Bitcoin ၏အကြံဥာဏ်သည် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တွင်လူအနည်းငယ်သာ Bitcoin အကြောင်းကြားခဲ့ရသော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း Willett က ၀ န်ခံသည်။ ပေါ်လာ။" သူကထပ်မံပြောကြားသည်မှာလူများသည်အဂတိလိုက်စားမှုအပေါ်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားလျှင်ယခုအခါခိုင်လုံသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိလာပါကဘဏ်တစ်ခုသည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဟုသူကထပ်ပြောသည်။
Willett အတွက်မူပိုက်ဆံသည်“ မျှဝေသုံးစွဲခြင်း” ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကတီးမှုတ်လျှင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ အကယ်၍ လူများမှရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ပါကလျှင်မြန်စွာပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။
ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးသည် cryptocurrency မလိုအပ်သောသူများအားအပူတပြင်းအခြေအနေတွင်ထားခဲ့မည်ဖြစ်သောကြောင့် Willett အလိုရှိသောအရာမဟုတ်ပါ။ cryptocurrency ကိုလူတိုင်းသိကြပြီးလူတိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ငွေများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အရင်းအနှီးကိုစွန့်စားရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိပါ။ သူတို့ကိုကျန်ရစ်စေခြင်းသည်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သူက“ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ရလဒ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အနည်းဆုံး cryptocurrency ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာမိုက်မဲရာကျပါလိမ့်မယ်” ဟုသူဆင်ခြင်သည်။
“ အကယ်၍ လူတိုင်းကအစိုးရငွေကိုယူပြီး cryptocurrencies ထဲကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်'လူသားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအတွက်ကမ္ဘာချီစစ်ပွဲအတိုင်းအတာအပေါ်မူတည်သင့်တယ်။ ”
Willett က ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူသည် cryptocurrency ကလေးမွေးစားခြင်းဖြစ်ပျက်လာမည့်အမြန်နှုန်းကို“ အလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်း” ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဝန်ခံသည် ထိုအချိန်မှစ၍ သူ၏အရေးအသားအချို့သည်အထူးသဖြင့် dystopian မျဉ်းများဖြင့်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အစိုးရများသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောကွန်ပျူတာကွန်ယက်များအားလုံး (အင်တာနက်အပါအ ၀ င်) ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အခွန်များကောက်ခံရန်အတွက်လွတ်လပ်စွာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေရရှိသောအစိုးရ။ ”
သူဒီလိုပြန်ပြောပြတယ် -“ ငါရေးတဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာနိုင်တယ်။ သူဟာကမ္ဘာပျက်မယ့်သူအတော်များများကိုကြုံတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ "အဲဒီမှာရောက်ရန်ကြာကြာ, နည်းနှောင့်အယှက်'ဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုသူက cryptocurrency ပိုင်ရှင်များ၏ပိုကြီးတဲ့အခြေစိုက်စခန်း cryptocurrency ဆီသို့တစ် ဦး လျော့နည်းလှိုင်းလေထန်အကူးအပြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုမြင်ကွင်းကိုရည်ညွှန်းကပြောပါတယ်။
Willett သည်နွားဈေးကွက်ကိုအချိန်အတန်ကြာဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောကြောင့် crypto ဘီလျံနာများသာသာရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ "ပုံမှန်အားဖြင့်အကြမ်းဖျင်းဆယ်ဆကျဆင်းမှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ် ဦး အကြမ်းဖျင်းရာပေါင်းများစွာပြေး -up, ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလပေါင်းများစွာဒါမှမဟုတ်နှစ်တွေအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်လာတယ်။ ” သူသည်ယနေ့အီတာကိုအကောင်းဆုံးအလောင်းအစားအဖြစ်သတ်မှတ်သည် မကြာသေးမီက ဟောကိန်းထုတ် ဒီသံသရာအတွက်ပတ်ပတ်လည် $ 9.500 ၏ ETH ထိပ်တန်း။
“ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူကြွယ်ဘီလျံနာတွေဟာနောက်ဆုံးမှာ crypto ပရဟိတသမားတွေဖြစ်လာကြမယ်၊'ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်အဆုံးသတ်လိုက်သောသူများအတွက်နာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာများစွာကိုဖြစ်စေသည်။ ”